Kuqhume iqupha kulindwe uZuma enyuvesi | News24
Kuqhume iqupha kulindwe uZuma enyuvesi
Pretoria - Abafundi abangamalungu e-ANC kanye nawe-EFF eTshwane University of Technology eSoshanguve, enyakatho nePitoli, babenokuhilizisana ngaphambi kokuba kutheleke uMengameli uJacob Zuma ngoLwesibili.
Kukholakala ukuthi amalungu e-ANC awafuni amalungu e-EFF angene ehholo, lapho uZuma ezokwethula khona inkulumo yakhe ebhekiswe kubona bonke abafundi.
Amalungu ala maqembu abecula izingoma zomzabalazo kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwezwakala abe-EFF sebethi: “Pay back the money”, nokuthiwa yikhona okucasule amalungu e-ANC.
Funda nalolu daba: Uzinikele emaphoyiseni 'okopolote amehlo' omkakhe
Lamalungu abehilizisana agcine esephumile ehholo ngesikhathi sekuqhuma iqupha.
Amaphoyisa kudingeke angenelele ngemuva kokuthola ukuthi kunomunye esixukwini obephethe isikhali, kubika iTheCitizen.
Abaholi kumanje baxoxisana nalamaqembu kodwa amalungu e-ANC asangaphakathi ehholo athi ngeke abuyele ngaphakathi amalungu e-EFF.